Raisal wasaaraha Ethopia Oo warkasoosaaray kulamada Saddex geesoodka ee Nairobi… – Kismaayo24 News Agency
Raisal wasaaraha Ethopia Oo warkasoosaaray kulamada Saddex geesoodka ee Nairobi…
by Mohamed Abdirashid Abaajo 6th March 2019 017
Dowladda Ethiopia ayaa ka hadashay shirka seddex geesoodka ah ee ka dhacaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo u dhaxeeya madaxda dalalka Ethiopia, Somalia iyo Kenya.
Qoraal kasoo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha Ethiopia ayaa lagu shaaciyay in Ethiopia ay qaadatay masuuliyadda Dhexdhexaadinta dalalka Somalia iyo Kenya oo xiriirkooda uu xumaaday waxii ka dambeeyay bartamihii bishii Febraayo ee sanadkaan.
Abiy Axmed ra’iisul wasaaraha Ethiopia oo ah guddoomiyaha urur goboleedka IGAD ayaa shaaciyay in masuuliyadda uu u qaaday sidii loo xalin lahaa khilaafka dalalka Kenya iyo Somalia, maadaama la doonayo in qeyb ka noqdaan isbadalka geeska Africa.
Kulamo hordhac ah oo u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaaraha Ethiopia ayaa xalay ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana kadib bilowday wadahadalka Uhurru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha Ethiopia ayaa lagu sheegay in EThiopia ay dooneyso inay deris wanaag ku wada noolaadaan dowladaha bariga Qaarada Africa ku wada yaala.
Ethiopia ayaa lasoo baxday isbadal siyaasadeed uu ka duwan kuwii hore tan iyo markuu xilka qabtay ra’iisul wasaare Abiy Axmed, waxaana uu la heshiiyay dowlado badan oo ku yaala bariga Africa.
SAWIRO: Somaaliya iyo Kenya oo heshiis gaaray Aqriso….
DHAGEYSO: Warkii habeenimo ee Radio VOS , 26-11-2015 by Cumar Laki Man
Degdeg: Kuxigeenka Xeer ilaaliyaha Qaranka oo u Geeriyooday Dhaawac kasoo gaaray weerarkii Liido lagu qaaday.
admin 23rd January 2016 23rd January 2016
War Cusub: Mareykanka oo Si aan Horay loo Arag uga Hadlay Askar la sheegay in Looga Dilay Duleedka Magaalada Kismaayo
Tifaftiraha K24 23rd November 2016